I-china eyenziwe ngokwezifiso ze-Crystal pear button Manufacturers, Suppliers, Factory - Quotation - MIMO FLOW CONTROL
Ikhaya > Inkinobho > Inkinobho yePearl > Inkinobho ye-Crystal pear
Inkinobho ye-Crystal pearl yenziwa ngohlelo lokulingisa iparele ne-crystal diamond, evame ukusetshenziselwa ijazi lemfashini eliphakeme kakhulu, izikhonkwane noma izicathulo zabesifazane abasezingeni eliphakeme ukwenza indima ye.
1. Isingeniso seInkinobho ye-Crystal pear:
2. Amapharamitha womkhiqizo weInkinobho ye-Crystal pear:
Izinkinobho ze-Crystal Pearl ezine-Bee Trimming for Clothing
ICrystal, i-ABS plastic, ingilazi noma igobolondo
500pcs / usayizi / umbala
Kuyafana nesithombe, futhi inga-oda umbala owenziwe ngezifiso
Izikhwama / Ukugqoka Komshado / Izembatho / Ijezi Elithengelwe / I-PartyDress
Yamukela imiklamo yangokwezifiso nomkhiqizo wangokwezifiso
Isikhwama se-OPP noma izidingo zamakhasimende ngokuya
3. Ubuhle benkinobho ye-crystal pearl
Umsebenzi omuhle, umoya ophakeme, umsebenzi onzima kakhulu.
4. Imiyalo yokusebenzisa umkhiqizo weInkinobho ye-Crystal pear:
Inkinobho yenhlanganisela ye-crystal pearl ingeyokuqala yezingubo eziqinile ezisezingeni eliphakeme
Inkinobho ebangeni eliphakeme ibonakala kakhulu ezintweni zayo ibanga eliphakeme, ukumodela kuhle, umbala muhle, ukuqina kuhle, lezi zici ziyizimo ezibalulekile zenkinobho yokuhlanganiswa kwenkinobho ye-crystal pearl.
1. Ungayenza kanjani idizayini yangokwezifiso?
Sicela usithumele i-imeyili ngemiklamo yakho kunoma yiluphi uhlobo lwamafomethi afana ne-Jpg, AI, CDR, PDF njll. Singenza amasampula wamahhala wokuvunywa kwakho.
Lapho isampula samukelwa, sicela usithumelele i-PO yakho nge-imeyili. Ngemuva kwalokho sizokuthumelela i-Invoyisi ukuqinisekisa ama-oda.
3. Yiziphi izinhlobo zokukhokha ezingamukelwa?
Sizoqala ukukhiqizwa uma inkokhelo ephelele ismade. I-PayPal, i-TT ne-West Union zamukelwa.
4. Yinde kangakanani futhi izwakalisa ini?
Isikhathi sethu sokuhola cishe izinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokuthola inkokhelo egcwele. Kepha ama-oda amaningi angathatha isikhashana. Imikhiqizo ithunyelwa nge -Door-to-Door Express (UPS, DHL, EMS, FedEx, ne-TNT) ..
5. Ungayithola nini intengo?
Sivame ukucaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuthola uphenyo lwakho. Uma uphuthuma kakhulu ukuthola intengo, sicela usishayele noma usitshele i-imeyili yakho ukuze sizokubheka njengokubaluleke kakhulu ukubuza kwakho.
Inkinobho ye-ABS eliphakathi